Cách Làm Bánh Táo Thơm Ngon Hấp Dẫn | Muasalebang - Muasalebang
Cách Làm Bánh Táo Thơm Ngon Hấp Dẫn | Muasalebang
Đang Đọc: Cách Làm Bánh Táo Thơm Ngon Hấp Dẫn | Muasalebang in Muasalebang
I-apula pie, eyaziwa nangokuthi i-apula pie, ikhekhe elimnandi elivela emazweni aseYurophu. Ikhekhe le-apula lingelinye lamaqebelengwane ezithelo okungafanele sikuphuthele ngenxa yokunambitheka kwawo okumnandi nokukhethekile, nakho okuhle kakhulu empilweni. Namuhla ngizokwethula ezinye izindlela zokupheka zikaphayi wama-apula omnandi futhi okhangayo ongawenza ekhaya.
1 Ungawenza kanjani uphaya we-apula obhakiwe omnandi ngesithombo/uhhavini ongenawo uwoyela
2 Indlela yokupheka i-apula pie nge-pan
3 Indlela yokwenza i-apple pie emnandi kakhulu
4 Indlela yokwenza i-apula pie esiphundu esiphundu
5 Indlela yokwenza i-apula lika-sweet potato pie
Ungawenza kanjani uphaya we-apula obhakiwe omnandi ngesithombo/uhhavini ongenawo uwoyela
Izithako ze-Baked Apple Pie
Ufulawa wenjongo yonke: 170 gr
Ibhotela elingenasawoti: 100 gr
Ushukela: 30 gr
Usawoti: 3 gr
Ushukela onsundu: 50 gr
Ijusi yelamula: 10 ml
Impushana yesinamoni: 3g
Ibhotela elingenasawoti: 20 gr
Ufulawa kakolweni: 5 gr
Inqubo yokwenza i-apula pie
Isinyathelo 1: Yenza i-apula pie crust
+ Faka izithako zoqweqwe lukaphaya we-apula endishini futhi uhlanganise kahle kuze kube yilapho ingxube ibushelelezi futhi ithambe ngokwanele.
Bese umboza ingxube nge-plastic wrap bese uyibeka esiqandisini amahora angu-2.
+ Ngemva kwamahora angu-2, lapho inhlama yephayi ye-apula isivumelana nezimo ngokwanele, khipha u-2/3 woqweqwe lukaphaya we-apula bese uwenza ube isicaba ngo-2-3mm ukuze wenze uqweqwe lwephayi le-apula. Enye inhlama imbozwe ngokugoqa ukudla futhi iqhubeke isiqandisini ukuvimbela inhlama ukuba ihlale
Beka inhlama eyisicaba ngobumnene esikhunjeni bese usika inhlama eyengeziwe.
+ Okulandelayo, faka isikhunta sekhekhe esiqandisini cishe imizuzu engama-30 ukuze uqinise isisekelo sekhekhe.
Isinyathelo sesi-2: Yenza i-apula pie
+ Ama-apula ayagezwa, ahlutshiwe futhi asikwe abe izingcezu ezincane
+ Faka ama-apula endishini yokuxuba noshukela onsundu, ujusi kalamula, impushana yesinamoni, nosawoti bese ushiya cishe imizuzu engama-30 ukuze ama-apula anethe ukunambitheka.
Ngemva kwemizuzu engu-30, lapho ama-apula esemunce izinongo, hlukanisa amanzi nama-apula engxube ye-apula.
+ Thela ijusi ye-apula epanini elingagxili bese ulibeka esitofini, slurry ngebhotela elingenasawoti kanye nofulawa kuze kube yilapho ingxube ishubile, bese ucisha ukushisa.
Isinyathelo sesi-3: Bhaka i-apula pie
+ Thela ingxube yejusi ye-apula nje i-slug esinyathelweni sesi-2 kuma-apula asikiwe ukuze uthole ingxube ye-apula.
+ Khipha igobolondo likaphaya we-apula esiqandisini, faka uphaya ugcwalise isikhunta, kuqweqwe lwephayi le-apula.
+ Thatha i-1/3 yoqweqwe lokuqala lukaphayi we-apula, uyigingqe, uyinqume ibe yizicucu ezinde futhi uhlele i-weave kabhasikidi phezulu kwekhekhe.
+ Ungasakaza ungqimba lwebhotela ebusweni bekhekhe ukuze wenze umbala wekhekhe ube muhle kakhulu ngemva kokubhaka.
+ Faka isikhunta se-apula kuhhavini, ubhake kuma-degree angu-180 imizuzu engu-40 kuya emaminithini (ungasebenzisa i-air fryer, futhi kuye ngokuthi hlobo luni lwe-ovini ne-air fryer, setha izinga lokushisa kanye nesikhathi ngokufanele).
+ Lapho uphaya wama-apula usuvuthiwe, yekela uphaya we-apula uphole ngaphambi kokuba uwujabulele.
Amanye amanothi ngesikhathi sokwenza i-apula pie:
I-apula pie crust kufanele isatshalaliswe ngokulinganayo epanini lekhekhe, kugwenywe ukuthi uqweqwe lube mncane kakhulu futhi lube lula ukubhoboza.
Kunconywa ukusebenzisa kokubili ama-apula aluhlaza nabomvu ukuze ube nokunambitheka okumnandi nokumuncu okuzokwenza i-apula pie inambitheke kakhulu futhi ibe mnandi.
Kufanele ubuke ikhekhe ngesikhathi sokubhaka ukuze i-apula pie ingashi
Uphaya we-apula obhakiwe unambitheka kangcono uma unikezwa kushisa.
Indlela yokupheka i-apula pie nge-pan
Izithako zophaya we-apula obhakwe epanini
Ama-apula: 700 gr
Ubisi olusha: 450ml
Ama-sandwich: izingcezu ezingu-10
Ushukela onsundu: 100 gr
Inqubo yokwenza i-apula pie ngepani
Ama-apula ayagezwa, ahlutshiwe, anqunywe, afakwe ebhodweni lamanzi ahlanganiswe nosawoti kanye ne-lemon ehlanjululwe imizuzu engu-15. Ngemuva kwalokho, geza ama-apula izikhathi eziningana emanzini, khipha futhi u-marinate ama-apula ngoshukela amahora angu-1-2.
Faka ama-apula afakwe ushukela epanini elingagxili, faka isitofu, i-slug ngokushisa okuphansi, lapho amanzi ashukela ebila, engeza ijusi kalamula kanye ne-slug cishe imizuzu engama-30 – ihora elingu-1, bese uvala ukushisa, engeza ibhotela. uhlanganise kuze kuncibilike ibhotela.
Dabula isemishi libe yizicucu ezincane bese ufaka endishini enkulu enobisi olusha. Cindezela kuze kube yilapho isinkwa sichotshozwa, bese ufaka ama-apula e-slug, uhlanganise kahle. Thela ingxube ye-apula epanini elingagxili, usakaze ngokulinganayo, uphendulele ekushiseni okuphansi, bese uvala.
Lapho i-apula pie ibhakwa cishe imizuzu engu-15, vula isembozo, ubhake eminye imizuzu engu-10, bese uvala ukushisa, uvumele upholile ngokuphelele, bese ufaka i-apula pie esiqandisini amahora angu-1-2 ngaphambi kokukhonza.
Amanye amanothi ekwenzeni uphaya we-apula obhakiwe ngepani
Ngesikhathi sokucwiliswa kwama-apula, ungaxubi amanzi amaningi anosawoti kalamula, okuzokwenza ama-apula abe muncu futhi abe nosawoti kalula.
Ukwenza i-apula pie bushelelezi, inqubo yokuklebhula nokuchoboza isangweji kufanele yenziwe ngokucophelela. Kufanele ukhethe isinkwa esithambile sesemishi, lapho ubhaka, sizoba bushelelezi.
Naka lapho wenza i-apula pie ngepani, ungalenzi ikhekhe libe likhulu kakhulu. Ubukhulu bekhekhe ngokuvamile buvela ku-5cm – 7cm ubukhulu, ngoba ikhekhe likhulu kakhulu ukubhaka, kuyoba nzima ukupheka, uma libhakwa isikhathi eside, lizoshisa kalula.
Indlela yokwenza i-apple pie emnandi kakhulu
Izithako zokwenza uphaya we-apula othosiwe
Ama-apula: 2 (cishe 350-400 gr)
Ufulawa wezinjongo zonke: 300g
Ubisi olusha: 120ml
Amaqanda enkukhu: 1 iqanda
I-vanilla: 1 ithisipuni
Ushukela oluyimpuphu (ukunambitha)
Inqubo yokwenza i-apula pie ethosiwe
Ama-apula ayagezwa, ahlutshiwe futhi anqunywe abe tincetu
Faka ubisi olusha, amaqanda, amafutha okupheka, i-vanilla endishini enkulu bese ushaya kahle ukuhlanganisa
Faka kancane kancane ingxube engenhla kufulawa, ugovuze kuze kube yilapho inhlama ibushelelezi futhi ishubile, bese umisa
Faka ipani elinganamathi esitofini, faka amafutha ngemuva kwepani, ulethe amafutha abile, bese wehlisa ukushisa.
Cwilisa izingcezu ze-apula engxubeni kafulawa futhi gazinga kuze kube nsundu osagolide nxazonke.
Uma i-apula pie isiphekwe, yikhiphe futhi uyibeke ephepheni elimuncayo ukuze ususe amafutha amaningi, ekugcineni ugoqe i-apula pie ngoshukela oluyimpuphu futhi sinekhekhe elimnandi elithosiwe le-apula.
Indlela yokwenza i-apula pie esiphundu esiphundu
Izithako ze-Steamed Apple Pie
Ubhontshisi: 70 gr
Iqanda elimhlophe: 70 gr
Ufulawa werayisi onama-70g
Ama-apula: 40 gr
Amafutha okupheka: 10 ml
Amanzi ahlungiwe: 20 ml
Inqubo yokwenza i-apula pie eshisayo
Ama-apula ahlanzwa, ahlutshiwe, ahlwanyelwe futhi anqunywe abe yizicucu ezincane. Ama-peas abilisiwe ahlutshiwe, bese efaka uphizi nama-apula ku-blender kanye ne-puree.
Uma ingxube yama-apula kanye nophizi ihlanzekile, yibeke endishini bese uthela ufulawa werayisi onamafutha, hlanganisa ufulawa werayisi onamafutha kanye ne-apula.
Khona-ke, shayela ungqimba omncane wamafutha okupheka epanini lekhekhe ukuze i-apula pie inganamatheli ekubunjweni.
Faka amaqanda amhlophe endishini, bese ushaya amaqanda amhlophe nge-mixer kagesi kuze kube yiziqongo eziqinile. Khona-ke, engeza ingxenye yama-peas ahlanzekile endishini yamaqanda abamhlophe bese uxuba kahle, bese uthele emuva endishini yamaqanda abamhlophe bese uxuba ngobumnene ukuze ungaqhumisi ama-bubbles emoyeni.
Thela ingxube ye-apula esikhunjini, bese uyibeka ebhodweni / ku-steamer, gazinga ikhekhe cishe imizuzu engu-10-15, bese ikhekhe liphekwe.
I-apple pie ene-steam ayigcini nje ngokuba nombala omuhle oluhlaza wamaphizi, kodwa futhi inobumnandi bemvelo bama-apula. Ikakhulukazi kule recipe ye-apula ye-apula ene-steamed, akukho ushukela osetshenzisiwe, ngakho-ke kunempilo kakhulu, ngisho nezingane ezineminyaka yobudala yokulunyulwa zingayisebenzisa.
Indlela yokwenza i-apula lika-sweet potato pie
Izithako zikaphayi wama-apula obhatata
Ufulawa kakolweni: 300 gr
I-almond powder: 15 gr
Ama-apula: ama-apula ama-2
Ibhotela elingenasawoti: 220 gr
Ushukela womoba: 40 gr
Ubisi olujiyile: 30 ml
I-Rum: 1/3 isipuni (ngokuzithandela)
Inqubo yokwenza i-apula lika-sweet potato pie
Isinyathelo 1: Hlanganisa ufulawa nebhotela
+ Sika ibhotela elingenasawoti libe yizicucu ezincane ulifake engxubeni kafulawa owomile, uhlanganise futhi usakaze ibhotela.
Gcoba usawoti emanzini abandayo bese uthele kancane kancane engxubeni kafulawa. Hlanganisa kahle kuze kube yilapho kwakheka inhlama ebushelelezi efanayo.
Isinyathelo sesi-2: Fukamisa inhlama okokuqala
+ Faka ingxube kafulawa egoqweni lepulasitiki, uyigoqe ngendlela engunxande, bese uyibeka esiqandisini cishe ihora elingu-1.
+ Fafaza ufulawa omncane ebhodini lokusika, ususe inhlama ku-wrapper, bese usebenzisa iphini lokugoqa ukuze ukhiphe inhlama ibe yisimo esingunxande. Okulandelayo, phinda iziphetho ezi-2 ngokushintshana, bese uyaphinda futhi. Ekugcineni, goqa iziphetho ezi-2 bese uwafaka ekugoqweni kokudla, ukugoqa. Faka efrijini cishe ihora elingu-1.
Isinyathelo sesi-3: Lungisa ubhatata
+ Geza ubhatata ngamanzi womise. Okulandelayo, hlambulula amazambane bese usika amazambane abe yizicucu ezingaba ngu-1-2cm ubukhulu.
+ Faka ubhatata ebhodweni, uthele amanzi emazambaneni. Ukushisa emlilweni ophakathi, bese ubilisa amazambane imizuzu engu-15-20 kuze kube yilapho amazambane ethambile, bese uvala ukushisa, ukhiphe amanzi, ukhiphe amazambane, bese uwafaka endishini.
Ngemva kokuba amazambane abilisiwe, sebenzisa imfoloko ukuze uhlanganise ubhatata kuze kube bushelelezi. Okulandelayo, engeza ushukela, ubisi olujikisiwe, i-vanilla, engxube yamazambane bese uxuba kahle nge-spatula.
+ Bese wengeza ufulawa we-alimondi, i-rum, bese uqhubeka usebenzisa i-spatula ukuze usakaze futhi uhlanganise ingxube kuze kuhlanganiswe ingxube. Sebenzisa ifilimu yokudla ukumboza ubhatata ukuze ufukamele.
Isinyathelo sesi-4: Fukamisa inhlama okwesibili
+ Ngokufanayo nangenhla, khipha inhlama esiqandisini, susa ukugoqa.
+ Gcoba ungqimba lwenhlama ebhodini lokusika ukuze kuthi lapho ugoqa inhlama inganamatheli, sebenzisa uphini lokuyigoqa ukuze uyikhiphe, bese ugoqa amachopho amabili enhlama ngokushintshana. Qhubeka ukhiphe uphaya we-apula bese ugoqa ikhekhe ndawonye. Mboza ngefilimu yokudla, bese ubuyisela efrijini cishe ihora elingu-1.
Isinyathelo sesi-5: Ukucubungula kokuqala kwama-apula nama-apula slugs anoshukela
+ Ama-apula ayagezwa, akhishwe bese enqunywa abe izingxenye ze-areca, abese ehlutshiwe futhi ehlutshiwe, bese efaka ama-apula endishini, uhlanganise kahle nejusi elincane likalamula.
+ Faka amanzi, ushukela womoba ebhodweni esitofini ugovuze phezu kokushisa okuphansi kuze kuncibilike ushukela. Bese upheka kuze kube amathumba kashukela, amabhamuza amakhulu avele futhi ushukela uqala ukushintsha umbala wamaphiko ephela, bese ufaka ibhotela elingenasawoti bese uncibilikisa konke. Okulandelayo, engeza ama-apula ebhodweni futhi ugovuze kahle. Faka i-vanilla encane, bese uqhubeka usakaza imizuzu engu-10 ukuvumela ama-apula ukuthi amunce ushukela ngokulinganayo. Lapho ama-apula eqala ukuthamba, cisha ukushisa.
Isinyathelo sesi-6: Roll bese ugoqa uqweqwe lwe-apula
Hlukanisa ikhekhe libe izingxenye ezi-2.
+ Engxenyeni yokuqala, ufafaze ufulawa omncane bese usebenzisa isikhonkwane ukuze ugoqe inhlama. Faka kancane ikhekhe ku-apula pie mold, cindezela ngobumnene ikhekhe eduze kwesikhunta, unqume okweqile. Goqa ukudla ngefilimu yokudla bese ukufake efrijini ukuze ulungise ikhekhe.
+ Enye inhlama, nayo igoqe inhlama. Sebenzisa ummese ukuhlukanisa ikhekhe libe yimicu cishe ngo-1-2cm ukuhlukana. Ekugcineni, faka ikhekhe efrijini ukuze ulungise imicu yenhlama.
Isinyathelo sesi-7: Bhaka ikhekhe
+ Faka ingxube kabhatata esikhunjeni sekhekhe, usakazwe ngokulinganayo. Okulandelayo, hlela ucezu ngalunye lwe-apula sauce phezulu. Bese, hlela ukusika kwenhlama ngayinye ngendlela ye-checkerboard, unqamule okweqile.
+ Onqenqemeni lwekhekhe, sebenzisa imicu emibili yenhlama ukuze uyiqinise njengomluko, bese uyibeka emphethweni oyindilinga wesikhunta sekhekhe.
+ Shisisa ihhavini ukuya kuma-degrees Celsius angama-200 imizuzu engama-20. Bese ufaka ikhekhe kuhhavini, ubhake ku-180 degrees C cishe imizuzu engama-40, kuze kube yilapho ikhekhe selivuthiwe futhi ligolide.
Ikhekhe le-apula le-sweet potato linephunga elimnandi le-caramel, i-crust igolide futhi i-crispy. Ingaphakathi le-apula liyashwaqa futhi linoshukela kuhlanganiswe nenyama kabhatata ukuze kwakheke ukunambitheka okuyinqaba nokukhangayo.
Ngenhla kunezindlela ezithile zokwenza i-apula pie emnandi futhi ekhangayo, nakuba kungenzima ukuyenza, kodwa idinga ukucophelela. I-apula engavamile izofaneleka kakhulu, ikakhulukazi ngezikhathi zezifo eziwumshayabhuqe ezicindezelayo, esikhundleni sokuphuma siyodlala noma ukudla ngaphandle, masenze lelikhekhe nezingane! Ngikufisela inhlanhla!
Cách chọn mua máy đo khoảng cách laser ngoài trời nào tốt? | Muasalebang
Top 5 túi ngủ cho bé tốt nhất 2022 | Muasalebang